China Indlela ezine Multi Shuttle System umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
I-Smart logistics sisicelo esihlanganisiweyo semeko yetekhnoloji ezenzekelayo kunye nobukrelekrele, ukuxhobisa onke amakhonkco, ukuqonda ngokufanelekileyo ukonyuka okukhulu komthamo wendawo yokugcina, kunye nokuphumeza ngokukhawuleza nangokuchanekileyo iindawo zokugcina, ukuhanjiswa, ukuhlela, ukusetyenzwa kolwazi kunye neminye imisebenzi.Ngokuhlalutya kwedatha yokusebenza esweni, sinokuqonda ngokuchanekileyo amanqaku eentlungu zeshishini, siqhubeke nokwandisa amandla oshishino, ukunciphisa iindleko kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle.Ukusetyenziswa kwetekhnoloji kunye nohlalutyo olukhulu lwedatha olusekwe kulungiselelo lobuchule luya kuba lelona sikhokelo siphambili kuphuhliso lwamacandelo olungiselelo, njengesalathisi esibalulekileyo sokulinganisa inqanaba lolungiselelo lolungiselelo kunye nolawulo.
1. Nceda iinkampani ukuba zonge iindleko kakhulu
Ukusetyenziswa kwenkqubo ye-shuttle yeendlela ezine zisebenzisa ngokupheleleyo ukuphakama kwendawo yokugcina impahla ukuqonda ukugcinwa okunzulu kwezinto kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle;Ugcino oluzenzekelayo olumandla kunye nenkqubo yokuhambisa ngaphambili inciphisa iindleko zabasebenzi, inciphisa amandla omsebenzi, kwaye iphucule impumelelo.
2. Ukusebenza ngokukhuselekileyo
Izikhululo zokukhetha i-ergonomic zinokuphucula ukusebenza komsebenzi kunye nokunciphisa amazinga eempazamo.
3. Ukunyuka kwamandla okusebenza
Umthamo wokuphatha indawo yi-2-3 ngokuphindwe kabini kuleyo yesitora esizenzekelayo esizenzekelayo.
4. Uphuculo kulwakhiwo lolwazi
Qonda inkqubo yonke yolawulo lwemathiriyeli ngaphakathi nangaphandle kokugcinwa ngeendlela zolawulo lolwazi.Kwangaxeshanye, ineembuzo enxulumeneyo kunye nolawulo lwengxelo ukubonelela ngenkxaso yedatha yolawulo lwesitora.
5. Ibhetyebhetye, imodyuli, kwaye iyanwebeka
Ngokweemfuno zoshishino, iishuttles ezininzi zinokongezwa ngokuguquguqukayo ukuphucula ukusebenza kakuhle.
IZIXHOBO ZOKUGCINA ULWAZI LWE-NANJING (IQELA) CO.,LTD ibonelela ngenkampani eyaziwayo yemoto enebhokisi ekulula ukwandiswa kwesisombululo sendlela emine, ukunceda inkampani ukuba isebenzise inkqubo yogcino oluzenzekelayo ukufezekisa ukusetyenziswa kwendawo ephezulu. , ukugcinwa kwempahla ngokukhawuleza, kunye neemfuno ezichanekileyo zokulawula ukungena kunye nokuphuma ngaphandle kokuqinisekisa ukugcinwa kwexesha lokuphendula komyalelo, ukuphucula ukusebenza kakuhle kweshishini, kunye nokugcina ngempumelelo abasebenzi kunye neendleko zokusebenza.
Inkampani eyaziwayo yeemoto ethi INFORM isebenzisane neli xesha yingcali esebenzayo ye-smart logistics kwishishini lamalungu emoto.Inkampani ikakhulu inoxanduva lokusebenza emva kokuthengiswa kwe-spare parts central warehouse.Ngaphambili, i-multitier mezzanine kunye ne-pallet racking yayisetyenziselwa ukugcinwa.Ngobuninzi beendidi zeendawo ezisecaleni, kusekho iingxaki ezininzi kugcino, ukuchola kunye nenkqubo ephumayo, ekufuneka isonjululwe ngezisombululo ezikrelekrele zokugcina izinto.Emva kokuqwalaselwa okuninzi, uhlobo lwebhokisi-indlela ezine isisombululo se-shuttle eninzi esibonelelwe yi-INFORM sinokuhlangabezana ngcono neemfuno zangoku zoshishino, ukuziqhelanisa nophuhliso lwenkampani kunye nolwandiso lweshishini olulandelayo, kwaye luncede ekuqinisekiseni ukuhambelana kwexesha lokuphendula, ukuphucula ukusebenza kakuhle kwenkampani. ishishini, kunye nokugcina ngokufanelekileyo imfuno yabasebenzi kunye neendleko zokusebenza, kunye nokufezekisa iziphumo ezibalulekileyo.
Isishwankathelo seProjekthi kunye neNkqubo ePhambili
Le projekthi igubungela indawo emalunga ne-2,000 square metres, kwaye yakhe indawo yokugcina impahla eshinyeneyo enobude obuphantse buziimitha ezili-10.Kukho malunga neendawo zempahla ezingama-20,000.Ibhokisi yokutshintsha inokwahlulwa ibe ngamacandelo amabini, amathathu nane, kwaye inokugcina phantse ii-SKU ezingama-70,000.Le projekthi ixhotyiswe nge-15 yebhokisi-uhlobo lwee-shuttles ezine-multi-way, ii-elevator ezi-3, isethi e-1 yomgca wokuhambisa i-racking-end kunye nemodyuli yokuhambisa ngaphambili, kunye neeseti ezi-3 zezikhululo zokukhetha iimpahla.
Le nkqubo imiliselwe kwisoftware ye-WMS ukuze iqhagamshele kwisistim ye-ERP yeshishini, ize ilungelelaniswe nesoftware ye-WCS, enoxanduva lokubola, ukusasazwa kunye nolawulo lokucwangciswa kwezixhobo zemisebenzi.
Isoftware yeWMS yesoftware yeWCS
Iimveliso ezingenayo neziphumayo zimi ngolu hlobo lulandelayo:
◇Isistim yeWMS ilawula ukudityaniswa kwebhakhowudi yebhokisi yotshintsho nezinto eziphathekayo, ibeka isiseko solawulo lwempahla;
◇Gqibezela umsebenzi we-intanethi webhokisi yentengiso ngesandla.Ibhokisi ye-turnover ingena kwisixokelelwano sokuhambisa emva kokuskena ikhowudi kunye nobhaqo lokuphakama okuphezulu ngaphandle kokungaqhelekanga;
◇Ibhokisi yenguqu engena kwisixokelelwano sothumelo, ngokwenkqubo yonikezelo lwengqiqo, iya kudluliselwa kwindawo echongiweyo ngesinyusi kunye neendlela ezine zokuhamba ezininzi.
◇ I-WMS ihlaziya ulwazi lwe-inventri emva kokufumana umyalelo wokugqiba ukuhanjiswa kwe-four-way multi shuttle, kunye nomsebenzi wokugcinwa kwempahla ugqityiwe.
Izinto ezifuna ukugcinwa zihlelwa ngokweendidi ezintathu ze-ABC ngokusekwe kumgwebo omkhulu wangaphambili wedatha, kunye nesicwangciso sendawo yomthwalo wenkqubo nayo iyilwe ngokuhambelanayo ngokusekelwe kwi-ABC.Indawo yempahla yomgangatho ngamnye ejongene ngqo ne-elevator sub lane ichazwa njengodidi lwendawo yokugcina imathiriyeli, indawo engqongileyo luhlobo B logcino lwemathiriyeli, kwaye ezinye iindawo luhlobo C logcino lwemathiriyeli.
Kuhlobo A indawo yokugcina izinto eziphathekayo, ekubeni ijongene ne-elevator ngokuthe ngqo, i-shuttle imoto ayifuni ukutshintshela kwimowudi ye-lane engundoqo xa ikhetha kwaye ibeka olu hlobo lwebhokisi yenguqu, egcina ixesha lokukhawuleza, ukuhla kunye nokutshintsha phakathi kwe-sub- kunye main-layini, ngoko ukusebenza kakuhle kuphezulu.
◇System ivelisa ngokuzenzekelayo amaza okuchola emva kokufumana iodolo yeERP, ibala imathiriyeli efunekayo, kwaye ivelise imathiriyeli yebhokisi yomsebenzi ophumayo ngokweyunithi yokugcina apho zikhoyo imathiriyeli;
◇Ibhokisi yenguqu ikhutshelwa kwisikhululo sokuchola emva kokudlula kwindlela emine yokuhamba ngeendlela ezininzi, ilifti kunye nomgca wokuhambisa;
◇Isikhululo esinye sokuchola sineebhokisi ezininzi ezisebenza ngokutshintshana, ngoko ke abaqhubi akufuneki balinde ibhokisi yotshintsho;
◇Isikrini somxhasi wesoftware yeWMS sixhotyisiwe, ukukhuthaza ulwazi lwendawo yomthwalo, ulwazi lwempahla, njl.njl. Kwangaxeshanye, ukukhanya phezu kwesikhululo sokuchola kukhanya kwindawo yempahla eza kuchongwa, ukukhumbuza umqhubi, ngaloo ndlela. ukuphucula ubuchule bokukhetha;
◇Ixhotyiswe ngeebhokisi zeeodolo ezininzi ezinezibane zamaqhosha kwiindawo ezihambelanayo ukukhumbuza umsebenzisi ukuba abeke imathiriyeli kwiibhokisi zeodolo ezikhanyisiweyo ukuphumeza ubungqina bobudenge nokunciphisa iimpazamo.
Emva kokuba ibhokisi yoku-odola ichongiwe, isixokelelwano siyidlulisela ngokuzenzekelayo kumgca wokuhambisa isitora.Emva kokuskena ikhowudi yebar yebhokisi yentengiso kunye nePDA, inkqubo iprinta ngokuzenzekelayo uluhlu lokupakisha kunye nolwazi lwe-odolo ukubonelela ngesiseko sokuqokelela okulandelayo, ukuhlanganiswa kunye nokuhlaziywa.Emva kokuba izinto ezincinci zokuodola zidityaniswe nezinye izinto ezinkulu zokuodola, ziya kuthunyelwa kumthengi ngexesha.